ချစ်သူ - Dip Switch Illuminated Push ခလုတ် Switch Illuminated Tactile Switch ခလုတ်ကိုနှိပ်သောသတ္တုခလုတ်သတ္တုပြောင်း Rotary Switch Tactile Switch
Illuminated Push ခလုတ်ကိုပြောင်းလဲပါ
အလင်းရောင် Tactile Switch
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်၏မရိုးသားမှုကိုပြုမူဆက်ဆံရန်တောင်းဆိုသည်, အချိန်အတွက်ဖောက်သည်များ၏ဝယ်လိုအားကိုဖြည့်ဆည်း, နှင့်အရည်အသွေးအတွက်ထုတ်ကုန်များကို, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များပိုမိုရွေးချယ်မှုပေးရန်ရည်ရွယ်.
ဖုန်နှင့်ရေစိုခံနိုင်သောထိတွေ့နိုင်သောခလုတ်များ C1201 စီးရီးလိပ်စာခလုတ်
CHA RB စီးရီးဖုန်မှုန့်နှင့်ရေစိုခံ mini Rotary Switch
CHA RA စီးရီး 4-16 အနေအထား rotary DIP Switch ကို
CHA CN16 စီးရီး 16mm အချင်းသတ္တု switch သည်
CHA CTR-85-H-4 / M-4 စီးရီးဖုန်မှုန့်ဒဏ်ခံနိုင်သော switch ကို
CHA သံမဏိအခွံ CN19 စီးရီးသတ္တု switch သည်
CHA CTR-8 စီးရီးစတုရန်းအမျိုးအစားဖုန်မှုန့်ခံနိုင်သောထိတွေ့နိုင်သောခလုတ်
ဦး ဆောင်ခဏ illuminated လိမ္မာပါးနပ် switch ကိုအတူ CHA C3011 စီးရီး SPST 1P1T
CHA C3001 စီးရီး Gold Plated silica gel သည်ထိတွေ့နိုင်သောခလုတ်များကိုထွန်းလင်းထားသည်
CHA ထုတ်ကုန်အသစ် C605-1L သေးငယ်သောထိတွေ့နိုင်သောခလုတ်ကိုလိပ်စာခလုတ်ကိုပြသခဲ့သည်
CHA C601B စီးရီးနှစ်ခုအရောင်များကို Illuminated Tactile Switch များ
CHA C3026 စီးရီးအသံနှင့်ဗွီဒီယိုခလုတ်နှစ်ရောင်ပါ illuminated push button switch square square သည်
CHA CTS(M)(ဂျေ)(ဇ)(ဦး)-6 စီးရီးရေစိုခံထိတွေ့နိုင်သော switch ကို
CHA CTR-12 စီးရီးစတုရန်းအမျိုးအစားဖုန်မှုန့်ခံနိုင်သောထိတွေ့နိုင်သောခလုတ်
CHA RA စီးရီး 4-16 အနေအထား Rotary Switch
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်သို့မဟုတ်စျေးနှုန်းနှင့်ပတ်သက်။ မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များအဘို့, ကျေးဇူးပြု၍ သင့်အီးမေးလ်ကိုထားခဲ့ပါ၊ 24 နာရီ.
Chau-Hua အုပ်စု (ဟောင်ကောင်) တည်ထောင်ခဲ့သည် 2007, သုတေသနအတွက်မူလ, အဆိုပါ dip switch နှင့်ထိတွေ့နိုင်သော switch ကိုဖွံ့ဖြိုးပြီးထုတ်လုပ်, တဖြည်းဖြည်းရေ - ခံနိုင်ရည်ထိတွေ့နိုင်သော switch ကိုအတွက်တိုးချဲ့ရန်, အဆိုပါ LED- illuminated switch ကို. အရည်အသွေးနှင့်ဝန်ဆောင်မှုတိုးတက်စေရန်, Chau-Hua Zhi Shuo စက်ရုံကိုတည်ထောင်ခဲ့တယ်(Dongguan) in 2016. ဒီနေ့, Chau-Hua သည်နှစ်ပေါင်းများစွာအဆင့်မြင့်အရည်အသွေး switch ကိုထုတ်လုပ်ရာတွင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သုတေသနကိုမြှင့်တင်ခဲ့သည်.
အတည်ပြုရန်စစ်ဆေးမှုတွင်သင်အသုံးပြုနိုင်သည်: နံပါတ် ၁ ဂဟေဆက်စက်တွင်ဂဟေဆက်ထားသောငါးပိကပ်ပါ။ မီးဖိုကိုဖြတ်ပြီးသွားသောအခါသံဖြူကိုကြည့်ပါ. သံဖြူအရည်ပျော်နှင့်ဂဟေဆက်ခြေလျင်အပေါ်ကောင်းစွာဖုံးလွှမ်းလျှင်, ဒါကြောင့်ပြbigနာကြီးမားတဲ့မဟုတ်ကြောင်းသက်သေပြနေသည်. NO.2 ထုတ်ကုန်၏ဂေါက်တံတိုင်ကိုသံဖြူထဲသို့တိုက်ရိုက်ထည့်ပါ (သံဖြူအပူချိန်ကိုလုံးဝအရည်ပျော်စေရန်ကြိုတင်ပါဝါကိုဖွင့်ပါ 240 ℃) ဘို့ 2-5 စက္ကန့်ပိုင်း, ပြီးတော့ထုတ်ယူပါ. ဂဟေဆက်ဖြစ်နိုင်သည်, အဆင်ပြေသွားမှာပါ. အဆက်အသွယ်ခြေထောက်များသည်အရောင်ပြောင်းသွားသည် (သို့) ချောင်မနေပါ. အထက်ပါနည်းလမ်းနှစ်ခု၏အခြေအနေများမရှိဘဲ, အဆိုပါဓာတ်တိုးအရောင်ဒီဂရီ ...
CHA-စိတ်ကြိုက်သင်္ကေတ LED ထိတွေ့နိုင်သော switch ကို
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီထုတ်လုပ်မှုနှင့် R ကိုအတွက်စေ့စပ်သည် & ၁၀ နှစ်ကျော်အတွေ့အကြုံရှိသောခလုတ်များ. သမားရိုးကျထုတ်ကုန်များအပြင်, ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်နှင့်အညီထုတ်ကုန်အသစ်များကိုလည်းထုတ်လုပ်နိုင်သည်. LED ၏အလင်းရောင်နှင့်အဖုံး၏သင်္ကေတကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်ပါသည်, နှစ်ရောင်ရှိသည်, သက်တမ်းကြာရှည်စွာဖြင့် output terminal ၏အစိတ်အပိုင်းများကို Jumper lead အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်, တိုက်နယ်ဒီဇိုင်းကိုလွယ်ကူချောမွေ့. အသုံးပြုခြင်း Consumer ထုတ်ကုန်များကိရိယာတန်ဆာပလာကွန်ပျူတာသုံးပစ္စည်းများဆက်သွယ်ရေးကိရိယာ
တရုတ်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းအရည်အသွေးမြင့် switch ကို
လိပ်စာ:Room1333, WanJunhui စီးပွားရေးအဆောက်အအုံ,NO782 Xixiang Avenue, Baoan ခရိုင်,ရှန်ကျန်းမြို့, ဂွမ်ဒေါင်းပြည်နယ်တရုတ် 518102
E-mail ကို: sales@chau-hua.com
ချစ်သူ ©မူပိုင်ခွင့် ©2021 မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး.